Ziveze kwi-bar yehotele, uthathe ithuba lesicakakazi, uze nabantwana bakho!
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba kunye neehotele » Ziveze kwi-bar yehotele, uthathe ithuba lesicakakazi, uze nabantwana bakho!
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zase China eziQhekezayo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ungayithanda le hotele. Abaphathi bafuna ukukunika amava ahlukileyo. Kuyakukhuthaza ukuba uziveze kwibar. Ukukrexeza kwamkelekile. Ihotele ikwanabongikazi abanezakhono eziphezulu ezifumaneka ngokuhlwa ukubeka abantwana bakho ezantsi. Emva kwayo yonke le hotele iseBeijing ilungele usapho.
Xa ushiya ihotele yethu ekupheleni kweholide yakho, awuyi kuba nethemba! Kuyakhuthazwa ukukrexeza.
I-COVID itshintshe uhambo nokhenketho, kubandakanya iihotele kunye neeholide, kubandakanya nomzi mveliso wokubuka iindwendwe.
Kuthiwani malunga nokuvezwa kancinci kwindawo yehotele. Yiza nabantwana bakho kuba ukukrexeza kulungile. Oku kunokwenzeka kuphela e-China, okanye ngaba oku kulahlekile kuguqulelo?
Ngohlobo lonyaka ebesinalo kwihlabathi liphela, ngamanye amaxesha amajelo eendaba ezentlalo anokuzisa ukusinda sonke esikufunayo ekupheleni kosuku.
I-COVID itshintshe ishishini lokubuka iindwendwe. Ngubani othi imithombo yeendaba zentlalo ayilunganga kwaphela ngaphandle kwaleyo inqwenela ukuzithengisa ngandlela thile, imilo, okanye ifom?
Umhlobo uye eBeijing kutsha nje kwaye wanikwa le ncwadana yihotele. Kuxabisekile. Uyayigcina kwaye uyifunda nanini na xa efuna ukuhleka. Ngokucacileyo, iguqulelwe ngokuthe ngqo, igama negama, ukusuka eMandarin ukuya kwisiNgesi.
Ummeli wethu uya kukwenza ulinde kwisikhululo seenqwelomoya. Ibhasi eya ehotele ibaleka ngaselunxwemeni lolwandle. Kungekudala uya kuziva uyoliswa kukudlula kwamanzi. Uya kwazi ukuba uyasondela ehotele, kuba uya kujikeleza ukugoba. Umphathi uya kukulinda kwiholo lokungena. Uhlala ezama ukulala nazo zonke iindwendwe ezintsha.
Le yihotele yosapho, ke abantwana bamkelekile kakhulu. Ewe sihlala sonwabile ukwamkela ukukrexeza. Abongikazi abanezakhono eziphezulu bayafumaneka ngokuhlwa ukuze babeke phantsi abantwana bakho. Iindwendwe ziyamenywa ukuba zidibane kwindawo yeebhari kwaye zizibonakalise kwabanye. Kodwa nceda uqaphele ukuba amanenekazi avumelekile ukuba nabantwana kwi-bar. Siququzelela imidlalo yezentlalo, ke akukho lundwendwe lishiyekileyo lodwa lokudlala nabo.
Iimenyu zethu zikhethwe ngononophelo ukuba ziqheleke kwaye zingonwabisi. Ngexesha lesidlo sangokuhlwa, iquartet yethu iya kujikeleza ukusuka kwitafile ukuya etafileni kunye nefiddle kunye nawe.
Igumbi ngalinye linezinto ezibalaseleyo zamalungu akho abucala. Ebusika, onke amagumbi ashushu. Igumbi ngalinye linebhalkhoni enika iimbono zamanyala! Awuyi kuphazanyiswa yingxolo yezithuthi kuba indlela phakathi kwehotele kunye nedike isetyenziswa kuphela ngabahambi ngeenyawo.
Umandlalo wakho wenziwe ngokwamasiko asekuhlaleni. Ukuba unazo naziphi na ezinye izimvo, nceda ukhalele intombazana ekwigumbi lentombazana. Nceda uthathe ithuba kuye. Uya konwaba kakhulu kukuqhekeza ihempe zakho, iblawuzi kunye nempahla yangaphantsi. Ukuba ubuziwe, uyakucofa ibhlukhwe yakho.
Xa usishiya ekupheleni kweholide yakho, awuyi kuba nethemba. Uya kusokola ukulibala.
Ke, ngaba ucwangcisa eyakho uhambo oluya eBeijing?